Magome Writer 'Village Fantasy Theatre Festival 2021
OTA Art Project	Magome Writer 'Village Fantasy Theatre Festival 2021 ~ Ihe nkiri na ihe omume okwu
A na -eme ihe nkiri nke Yamanote Jijosha, ụlọ ọrụ ihe nkiri nke dị na Ota Ward, na mmemme okwu na ndị ọbịa pụrụ iche.
Anyị ga -ewebata ihe dị n'ime mmemme ihe nkiri fantasy nke afọ a.
* A ga -ere otu oche na nhazi oche nkịtị na -ahapụghị otu oche n'ihu, azụ, aka ekpe na aka nri.
2021 afọ 12 ọnwa 5 ụbọchị
13:00 amalite (12:30 emeghe)
② Malite na 16:00 (Mepee na 15:30)
Ọrụ (Ndị ọzọ)
[Ọkara nke mbụ] Egwuregwu ihe nkiri "Otafuku" (Nke mbụ: Shugoro Yamamoto, Director: Masahiro Yasuda)
[Ọkara nke abụọ] Mmemme mkparịta ụka
Atriclọ ọrụ egwuregwu ahụ Yamanote Jijosha
Yukiko Seike (onye na -ese manga)
② Onye ọbịa
Mie Muraoka (onye edemede na onye ntụgharị okwu Bekee)
Eri Muraoka (onye edemede)
Rebọchị ntọhapụ: Eprel 2021, 10 (Wednesde) 13: 10-
2,000 yen oge ọ bụla
Masahiro Yasuda (Director / Director nke Yamanote Jijo)
Amụrụ na November 1946, 11 na Tokyo.Prọfesọ Emeritus nke Mahadum Tama Art.Onye isi ụlọ ihe ngosi nka nke Maebashi.Onye na -ese vidiyo.Nne m bụ onye na -ede akwụkwọ akụkọ Yoko Hagiwara.Nna nna m bụ onye na -ede uri bụ Sakutaro Hagiwara. Na 14, sonyere na mwepụta ụlọ nyocha ihe nkiri, Tenjo Sajiki, nke Shuji Terayama nọ n'isi ya.Na -arụ ọrụ dị ka onye na -eme ihe nkiri na onye ntụzi. Na 1967, sonyere na oghere vidiyo vidiyo nke Katsuhiro Yamaguchi na Fujiko Nakaya.Na -arụ ọrụ vidiyo. N'afọ 1972, Parco Publishing wepụtara "Madhouse" kwa ọnwa.Na-arụ ọrụ dị ka onye nchịkọta akụkọ. Onye nkuzi 1975 na Mahadum Art Art.Kemgbe ahụ, ọ na -eje ozi dị ka prọfesọ, onye isi, onye isi, na onye ntụzi. Ọ nọ n'ọnọdụ ya ugbu a kemgbe 1982.Isi ọrụ "Shuji Terayama na Ncheta" Chikuma Shobo. "Kwa ụbọchị bụ ihe egwuregwu" March Shobo. “Oge iwepụta” Film Art Co., Ltd. "Nnwale ihe nkiri / ndị mmadụ n'ọdụ ụgbọ elu" Froebel-kan. "Ọ bụrụ na ịnwụ, ị nwere ike dee ihe ọ bụla," Shinchosha. Shinchosha "Ndụ dị egwu bụ eziokwu."
Ka emechara “5 sentimita kwa nkeji” (Original / Makoto Shinkai) “Oge Dị Oké Mkpa”, 20th Media Media Festival Festival Media nwetara onyinye ihu ọhụrụ na ngalaba Manga na ememme Arts na 19th Sense of Gender Award Grand Prize.Ugbu a, a na -emegharị nrụgharị nrụgharị "Ịkwa ákwá na Ọnwa".
Emechara ọkara mbụ nke mmụta doctoral na ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na mahadum ụmụ nwanyị Japan.Na-etinye aka na njikwa na nyocha nke ọrụ nne nne ya Hanako Muraoka na nwanne ya nwanyị Eri Muraoka, ma tinye aka na nhazi nke "Hanako Muraoka Exhibition Corner" na Toyo Eiwa Jogakuin.Anyị ga -arụkwa ọrụ ịkwalite mmekọrịta enyi na enyi n'etiti Japan na Canada.Ntụgharị asụsụ gụnyere "Ann Ann Memories of Days" (Shincho Bunko, 2012), "Prince and Kojiki" (Gakken Plus, 2016), "Hilda-san na 3 Bikinokozaru" (Tokuma Shoten, 2017), "Hibike I" No Utagoe "( Fukuinkan Shoten, 2021). Na 2008, ọ rụrụ ọrụ dị ka ntụgharị okwu maka usoro "Anne nke Green Gables" nke Hanako Muraoka (Shincho Bunko).
Ọ gụsịrị akwụkwọ na ngalaba nka na akwụkwọ ozi, Mahadum Seijo.Mgbe ọ rụsịrị ọrụ dị ka onye nta akụkọ, sonye na njikwa na nyocha nke ihe na nna nna Hanako Muraoka na nwanne ya nwanyị, Mie Muraoka.Anyị ga-agbakwa mbọ kwalite mmekọrịta enyi na enyi n'etiti Japan na Canada.Akwụkwọ "Ann's Cradle-The Life of Hanako Muraoka-" (Magazine House, 2008 / Shinchosha [Bunko], 2011) bụ akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ akụkọ TV ụtụtụ NHK ụtụtụ 2014 "Hanako to Anne".Akwụkwọ ndị ọzọ gụnyere "Hugging Anne" (foto Seizo Watase / NHK Publishing, 2014), na "Hanako Muraoka na World of Red-haired Anne" (Kawade Shobo Shinsha, 2013) deziri ya.Akwụkwọ ya na nso nso a bụ "Egwu ikpeazụ bụ Akụkọ Tokiko Iwatani" (Kobunsha, 2019), nke na-egosi ndụ onye na-agụ egwú Tokiko Iwatani.
A ga-eme ihe ngosi ihe ngosi na Ota Bunkanomori Exhibition Corner dị ka ihe metụtara ya.
"Ihe atụ nke Hanako ka Anne, Kashitaro na Tom Sawyer" ngosi
Omelọ ihe nkiri nke Magome Bunshimura